समाचार - कसरी बच्चाहरूको टूथब्रश छनौट गर्ने
कसरी बच्चाहरूको टूथब्रश छनौट गर्ने
धेरै आमाबाबुले बाल्यकालदेखि नै उनीहरूको दाँत माझ्ने बानी विकास गर्नेछन्, त्यसोभए बच्चाहरूले दाँत कता राम्रो दाँज्नु पर्छ कि? म कस्तो प्रकारको टूथब्रश रोज्नु पर्छ? बच्चाहरूको टूथब्रश छनौट गर्दा के सावधानहरू हुन्छन्? आउनुहोस् आज साझेदारी गरौं: कसरी बच्चाहरूको टूथब्रश छनौट गर्ने
बच्चाले ब्रश गर्न थाल्दा त्यस समयमा हेर्नुहोस्। जब बच्चा लगभग २ बर्षको हुन्छ, माथिल्लो र तल्लो दाँत मूल रूपमा लामो हुन्छन्। यस समयमा, सावधान आमाले बच्चाको ब्रशिंग बानी खेती गर्नुपर्छ र बच्चाको लागि उपयुक्त एक किन्नुपर्दछ। टूथब्रश बाहिर।
बच्चाहरूको टुथब्रश छनौट गर्दा, हेर्नुपर्ने पहिलो कुरा टूथब्रशको ब्रुल्सको कोमलता हो। बच्चाको टुथब्रश सकेसम्म नरम बनाउनु पर्छ। मध्यम र कडा bristles प्रयोग नगर्नुहोस्। मध्यम र भारी ब्रिस्टलले बच्चाको कोमलतामा हानी गर्दछ। Gums
थप रूपमा, जाँच गर्नुहोस् कि बच्चाको टुथब्रसको टुप्पो तपाईंको बच्चाको लागि छनौट गरिएको छ सानो छ, धेरै चौडा छैन, फराकिलो बच्चाको मुखमा लचिलो रूपमा घुमाउन सजिलो छैन, र सानो टिप ठूलो क्षेत्र हुन सक्छ। सफा गर्दै।
ह्यान्डलको समस्या पनि छ। किनकि बच्चाको सानो हात तुलनात्मक रूपमा सानो छ, धेरै सानो ह्याण्डल छनौट नगर्नुहोस्, तर थोरै मोटा ह्याण्डलले, जसले बच्चालाई दाँत माझ्ने बेला समात्नेछ। टूथब्रश खरीद गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको बच्चालाई सन्दर्भको लागि ल्याउनुहोस्।
त्यसोभए बच्चाहरूको टूथब्रसको प्रतिस्थापन समय हुन्छ। उनीहरूलाई प्रति ush- months महिनामा प्रतिस्थापन गर्न सिफारिश गरिन्छ, टुथब्रश ब्रस्टल झुम्का वा झर्दा सम्म पर्खनुको सट्टा। अवश्य पनि, यदि टूथब्रश ब्रिल्ट्स झुकेका छन् वा months महिना भित्र खस्छन्, त्यसो भए तुरुन्तै बदल्नुहोस्।
पोष्ट समय: अगस्ट २ 27-२०२०
ठेगाना: न।, 45, औद्योगिक एकाग्रता क्षेत्र, कायुन टाउन, Huaian जिल्ला, Huaian, Jiangsu, चीन